Banaan baxyo lagu taageerayo shirkii wada tashi ee Muqdisho oo Gaalkacyo ka dhacay, – SBC
Banaan baxyo lagu taageerayo shirkii wada tashi ee Muqdisho oo Gaalkacyo ka dhacay,
Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug gaar ahaan dhanka maamul goboleedka Galmudug maanta waxaa ka dhacay banaan bax ay ka soo qeyb galeen dhinacyo badan oo isugu jira dadweynaha Magaalada, odayaal, waxgarad iyo maamulka gobolka.
Banaan baxan ayaa ay dadkii ka soo qeyb galay ku muujinayeen taageerada kulankii wada tashiga ee maalmo ka hor ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho xarunta Dalka Soomaaaliya.
Halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha sar sare ee maamulka Galmudug sida madaxweyne ku xigeenka Maamulkaas, Wasiiro ka tirsan Galmudug.
Waxay halkaasi ka sheegeen madaxdii ka hadashay iyo odayaashaba in kulankii wada tashi ee soo gaba gaboobay uu ahaa mid siweyn ay ugu qanceen islamarkaana uu yahay kulan kii ugu horeeyay oo sidan oo kale isku afgarto ka shacab iyo maamul ahaana ay diyaar u yihiin hirgelintiisa.
Dadweynihii banaan baxani ka soo qeyb galay ayaa waxaa ka muuqatay shucuur wadani nimo iyadoo ay lulayeen wacyaabo ay ka mid ahaayeen calamada Umada Somalia midka nabada iyo Galmudug, iyagoona socod ku maray wadooyinka waaweyn ee magaalada ugu dambeyntiisa isugu tagay Garoonka kubada Cagta,